BAOLINA KITRA :: Nampidirin’ny Jeune Afrique ho “Top 5” i Madagasikara • AoRaha
BAOLINA KITRA Nampidirin’ny Jeune Afrique ho “Top 5” i Madagasikara
Namoaka ny filaharan’ireo firenena afrikanina eo amin’ ny taranja baolina kitra ny gazety boky Jeune Afrique, omaly, ka nampiditra an’i Madagasikara ho isan’ireo dimy voalohany na ny “Top 5”, tamin’ity taona ity. Milahatra eo alohantsika, amin’izany, i Maraoka, Nizeria, Sénégal ary Mauritanie.
“Ankoatra an’i Mauritanie dia isan’ireo firenena kely hiatrika ny dingan’ny famaranan’ny CAN i Madagasi­kara. Ny fandresena indroa nisesy nanoloana an’i Guinée Equatoriale (1 – 0, 1 – 0) sy ady sahala nanoloana an’i Sénégal (2 – 2) azony taorian’ny efa nandreseny an’i Soudan tamin’ny lalao mandroso (3 – 1) no nahazoana izany tapakila izany”, araka ny voalaza ao anatin’
ity gazety boky ity.
“Isan’ireo nitondra ny anjara birikiny, tamin’ny fampia­karana an’i Madagasikara i Nicolas Dupuis, teknisianina frantsay. Tamin’ny taona 2017 dia laharana faha-18 izy ireo”, araka ny voasoratra hatrany.
Mbola any aorian’i Mada­gasikara avokoa ireo ekipa goavana toa an’i Tonizia, Côte d’Ivoire, Ejypta sy ireo maro hafa. Ankoatra izao filaharana navoakan’ny Jeune Afrique izao dia mbola miandry ny vokatra amin’ny “CAF Awards”, izay naha­voa­fantina ny Barean’i Madaga­sikara hiatrika ny famaranana eo amin’ny ekipam-pirenena mendrika. Hotanterahina any Sénégal, amin’ny 8 janoary 2019 ho avy izao izany hetsika fanao isan-taona izany.
Rugby-”Match de defi”
Fampitana amin’ny fahitalavitra
Paralympika – Fifaninanam-pirenena Hiaro ny voninahitr’Analamanga ny ACBHM sy Akama ary COSAHP
Fibatana fonjamby Handray ny fifaninanana hifanintsanana amin’ny lalao Olympika i Madagasikara
FAMORIAM-BAHOAKA FANOHERANA FIFIDIANANA :: Handray fepetra hentitra ny mpitandro filaminana